रातमा निद्रा लाग्दैन? वैज्ञानिकहरु भन्छन् क्याम्पिंग जानुहोस् | Kullabs
रातमा निद्रा लाग्दैन? वैज्ञानिकहरु भन्छन् क्याम्पिंग जानुहोस्
आजकलको जमानामा बेलुकामा बाटो को बत्ति, काममा कम्प्युटरको स्क्रिन, फोनको स्क्रिनमा हेर्ने बानि आदिले अहिलेका पुस्तामा निद्रा नलाग्ने भएको धेरै कुरा सुन्नमा आउँछ। तर नयाँ अनुसन्धान अनुसार दुइ-तीन दिन प्रविधिमुक्त भएर घुम्न जानु यसको उपाय हुन सक्छ।
नयाँ दुई-भागमा Current Biology मा प्रकाशित गरिएको अध्ययनअनुसार मानव स्वयंसेवकहरुको एक समूहमाथि कोलोराडोको एक जंगल बाहिर र अर्को समूहलाई घरमा बसेर एक हप्ताको अन्तिम दिनहरु(weekend)मा गरिएको अध्ययनबाट यस्तो नतिजा देखिएको थियो। तिनीहरूलाई घाम र आगो बाहेक अरु कुनै प्रकाशको कुनै पनि स्रोत प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको थिएन। यो समयमा तिनीहरूले प्राप्त गरेको प्रकाशको स्तर मापन गरिएको थियो। दुई दिन पछि अनुसन्धानकर्ताहरूले उनिहरूले कस्तो गर्दैछन् भनेर हेर्न परीक्षणहरु गरिएका थियो।
“यो अध्ययनले के देखाउँछ भने हाम्रो अन्तरिक घडी प्राकृतिक प्रकाशको धेरै र चांडो भर पर्न सक्छ।“ केनेथ राइट, कोलोराडो विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भन्छन्। हाम्रो आधुनिक वातावरणमा बाँचिरहेका जनमानिसमा यो प्राकृतिक घडीमा कृत्रिम प्रकाशले असर परेको हुन्छ र यो घडी ढिलो हुने हुन्छ। यस्ले स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ र निद्रा बेलामा नलाग्ने हुन्छ। तर एक विकेन्ड यात्रा गरेर कृत्रिम प्रकाशको स्रोतहरुबाट टाढा भए यो हाम्रो अन्तरिक घडी ठिक हुन सक्छ।
विज्ञानले निद्राको ढाँचा Melatonin ले मिलाउने गर्छ भनेर भन्छ। यो हर्मोन(hormone) ले शरीरलाई निद्रा लगाउन तयार गर्छ र हाम्रो प्राकृतिक रुपमा सुत्ने ताल मिलाउँछ। यो हर्मोनको वितरण आंशिक रुपमा हाम्रो वरपरको प्रकाशको वातावरणले नियन्त्रित हुन्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले स्वयंसेवकहरुको melatoninको स्तर मापन गर्दा गर्मि महिनामा १.४ घण्टा अगाडी र जाडो महिनामा २.६घण्टा अगाडी उत्पादन भएको देखियो।
हाम्रो आन्तरिक घडीमा melatoninले गर्ने असर रातमा निद्रा नलाग्ने मात्र हुँदैन। यसको सम्बन्ध अरु स्वास्थ स्थितिहरु, जस्तै देख्नमा अप्ठ्यारो हुने, चिडचिडापन, मधुमेह र मोटोपनामा पनि देखिएको छ।
तर यसो भन्दैमा हरेक हप्ता घुम्न जान पनि सकिंदैन। यसको विकल्प भनेको बिहानमा सक्दो धेरै प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त गरेर हुन्छ, र राति सुत्नु भन्दा एकदुई घण्टा अगाडी फोन र ल्याप्टप नचलाउनु हुन सक्छ।
घरहरुको डिजाइन गर्दा थप प्राकृतिक सूर्यका प्रकाश ल्याउन सकियो भने स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्छ। ठुला कम्पनीहरुले वातावरणबाट प्राकृतिक प्रकाशलाई प्रयोग गर्न सके कामबाट राम्रो नतिजा आउने नै छ। र कामदारहरुले राम्रो निद्रा पाए काममा बढी जागरुकता आउने पनि यस अध्ययनबाट देखियो।